Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo faahfaahsan
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo faahfaahsan
Xarunta Dhexe ee JWXO warbixinadii dagaalada ay nasoo gaadhsiiyeen ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraradii ciidanka gumaysiga Itoobiya lagu qaaday. Warbixinta waxaa ka mid ah khsaaraha xoogan ee ciidanka Gumaysiga kasoo gaadhaya gawaadhada ay ciidamada ku qaadaan oo ku adooma ama isku dhaca intay socdaan, taasoo muujinysa cabsida ay ku marayaan wadooyinka oo dhabagal badan lagu fuliyo. Dagaalada aan helnay warbixintooda oo ka dhacay todobo aag ayaa Gumaysiga laga dilay inta la hubsaday ciidan gaadhaya toboaneeyo askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac intaa ka badan waxayna u dhaceen dagaaladu sidan;
28/5/14 Daarasalaam oo Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya kudhex maray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
4/6/14 Heeladheere oo Garbo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/6/14 Wabiyar oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari tiro aan laxaqiijinin na waa lagaga dhaawacay.
5/6/14 Wabiyar oo qabridahare katirsan weerar rogaal celis ah oo ay CWXO kuqaadeen ciidan uu gumaysigu leeyahay oo howlo dad dhibis ah ujoogay halkaas waxay ku gaadhsiiyeen khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
8/6/14 Cadaadlayowga oo dagmada Galaalshe katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/6/14 Beer-ow-khalaf oo Garbo katirsan dagaal CWXO iyo kuwa cadawga ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
11/6/14 Beerxereed oo Garbo katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 1 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
Dhanka kale waxaa soo badanaya gadoonka iyo iskudhaca baabuurta ay ciidanka gumaysigu wataan kadib markay khaati ka istaageen maritaanka wadooyinka taas oo keentay in baabuurta ay u wadaan sixoog ahoo aan loogu tala galin islamarkaana ay galaan shilal aad ubadan 1-9 bishan aan kujiro waxaa shil galay 8 baabuur oo kuwa ay ciidanka cadawgu qaataan ah. Waxayna shilalkanu kadhaceen Galadiid iyo Wijiwaaji dhaxdooda waxaa gugadoomay 1 baabuur oo aan laxaqoojinin khasaaraha cadawga. Tuulada Baka iyo Dhagaxbuur dhax dooda waxaa kugadoomay 1 baabuur waxaana laxaqiijiyay bakhtiga 20 askari. Higlalay iyo Dhagaxbuur dhax dooda waxaa iskudhacay 2 baabuur oo ay ciidanka cadawgu lahaayeen waxaana ku bakhtiyay in kabadan 80 askari
dhaawacana lama xaqiijinin. Afyaraado oo Wardheer katirsan waxaa kugadoomay 1 baabuur khasaarahana lama xaqiijinin.
Sidoo kale Baabili iyo Dhagaxle dhax dooda waxaa isku dhacay 2 gaadhi oo kuwa cadawga ah waxaana ku bakhtiday 42 askari tiro kalana way ku dhaawacantay.